ဆေးဝါး - ဝီကီပီးဒီးယား
ဆေးဝါး (အင်္ဂလိပ်: medication[မှတ်စု ၁]) သည် ရောဂါများအား ရှာဖွေရန်၊ ကုသရန်၊ ပျောက်ကင်းရန် သို့မဟုတ် ကာကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည့် ဆေးဖြစ်သည်။ ဆေးဝါးကုထုံး (pharmacotherapy) သည် ဆေးပညာနယ်ပယ်တွင် အရေးပါသည့် အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
↑ ဆေးဝါးကို အင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့် pharmaceutical drug, pharmaceutical, pharmaceutical preparation, pharmaceutical product, medicinal product, medicine, medication, medicament စသဖြင့် အမျိုးမျိုး ခေါ်ဝေါ်ကြသည်။
↑ US Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, SEC. 210., (g)(1)(B). Archived 12 May 2009 at the Wayback Machine. Accessed 17 August 2008.
WHO မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများစာရင်း
SuperCYP: Database for Drug-Cytochrome- and Drug-Drug-interactions Archived3November 2011 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဆေးဝါး&oldid=692051" မှ ရယူရန်
၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၂၈ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၄:၅၄ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။